Kungakhathaliseki uhlelo Ukushisa, sihilela ukucushwa ukuthi kungenziwa ngendlela ethile. Lokhu kwenzelwa ukuqinisekisa ukuthi imingcele kwezinye izindawo ayeseduze nokukhokha komnikazi. Lokhu kwenza kube nokwenzeka ukuba sifinyelele kahle. Ukulungisa, ungasebenzisa izindlela ezihlukahlukene, kodwa yesimanje ezivamile futhi valve sokulinganisa, isimiso okuyinto okusesihlokweni esithi.
Ukushisa izinhlelo ukuphakamisa isidingo okulinganisa, okuyinto kulungiselelwa wokubacindezela. Inhloso yalezi manipulations iwukwenza ukugeleza kwamanzi phezu kwamagatsha ehlukile wesifunda kunani oyifunayo, ngakho kuphela ubukhulu edingekayo ukushisa Siyonikwa ukuba kurediyetha ngamunye. Uma kuziwa izinhlelo elula, edingekayo kwamanzi kuhlinzekwe yinkampani kukhethwe kahle ipayipi diameters.
Ukusetshenziswa kumasistimu eziyinkimbinkimbi
izinhlelo eziyinkimbinkimbi emsebenzini wabo ukuhlinzekela ukulungiswa of washers ekhethekile, elinikeza isilinganiso kuvulwa ukugeleza kwamanzi e lemali efanele. Lezi zindlela aphelelwe yisikhathi, manje selisetshenziswa indlela yesimanje, okuyinto sivezwe kula ukufakwa valve ngokulingene. Lezi amadivayisi valve ibhukwana, okuyothi ngalo kokupholisayo ukugeleza ukulungiswa senziwa. Mshini has a umphelelisi okuyinto ligamanxa ukugeleza nokufakwa asetshenziselwa le njongo.
Uma ezenziwe zendawo, esetshenziselwa kulinganisa valve, isimiso okuzokwenziwa kuchaziwe ngezansi, kungaba sikulungele ukufaka idivayisi. Ukuze siqale ukuqondisisa isimiso sekulinganisa bafudumale system. Ukuze wenze lokhu, ungahambisa ekupheleni ufile, okuyinto has radiators eziningana, isenzo odlule njengoba abathengi energy. Ipayipi kubo sidla ethile Isibandisi, osuke usushisa kakade lokushisa design. Kuyinto uzimisele kuye ngokuthi indlela ukushisa kakhulu iyadingeka ukuze isikhala bafudumale.
Manual okulinganisa valve isetshenziswa esimweni lapho radiators beswela of valve thermostatic futhi amanzi ukugeleza isilinganiso ngamunye wabo ke kungokwaphakade. Wathi idivayisi ngalesi komsele ukubuya, endaweni lapho kungenziwa uthathe wesitimela ezivamile. Lokhu kukuvumela ukwenza izilinganiso ezidingekayo, ubambe valve ngejubane oyifunayo. ukugeleza ezithile njalo lamanzi amagatsha elawulwa ngeke kwaqinisekiswa. Noma kunjalo, abasebenzisi njalo athola kulelo izinguquko ukugeleza rate, kungase kwenzeke lapho nabalawuli thermostatic efakwe radiators. Ziklanyelwe ukulawula egumbini Ukushisa umfutho kanye ukudala isithiyo endleleni amanzi, kuncishiswe inani izimali zawo. Esikhathini reverse ezivamile komsele kokupholisayo ivolumu ukugeleza rate ngeke ifane.
Manual okulinganisa valve kuzoqinisekisa ethile kokupholisayo ukuthi kuzoqinisekisa nomphumela ofiselekayo lapho inani lamaseli incane futhi awufiki 5 izingcezu. Uma silinganisela kwenkululeko ukulawulwa amath-, isikimu ekhona kungase kushintshwe kalula. Uma isibalo radiators okukhulunywa eside, baya yamahhashi. Thermostat ogibele ibhethri okokuqala ligamanxa ukusakaza kokupholisayo ukuthi kuzobangela ukwanda of flow kurediyetha yesibili. It kuzovala valve, ukugeleza iya kurediyetha lwesithathu nokunye. Ekugcineni, lo msebenzi ngeke kuholele yokuthi amanye amabhethri kuyoba cool kakhulu, kuyilapho ezinye ahlale abandayo, kanjalo kuyoba amagatsha ukungalingani. Okuzenzakalelayo umphini ngokulingene kumele ukufakwa isikhuphukeli noma igatsha ngenombolo ngokwanele ezinkulu Ukushisa amadivayisi, kuphela ke uhlelo izosebenza kahle.
Umgomo we operation ye-valve ku isikhuphukeli ngenombolo enkulu radiators
Uma uzosebenzisa umphini othomathikhi ngokulingene e izimo ichazwe ngenhla, isimiso isinyathelo kuhlukile kancane. Ukubeka valve ke eyenziwa ngaleso esiphezulu ukalwe ukugeleza rate. Ngo kokuhlinzwa, lapho thermostat kwanoma yiluphi uhlobo kwaba ibhethri uzokwehla ukusetshenziswa kwamanzi ashisayo, ingcindezi luyokhula kusayithi. Automatic control inzuzo umfutho ngokusebenzisa tube capillary, uzokwenza ukuba idivayisi ukuphendula ngokushesha, ukulungisa ukugeleza kwamanzi, kuyilapho lonke amath- awunaso isikhathi ukusebenza, ukugeleza ngeke idlulela, futhi le ndlela ibe hydraulically ukulinganisela.
Ukulinganisela valve, isimiso eliye ezichazwe ngenhla, linikezwa ukudayiswa in ezahlukahlukene. Ngaphambi kokuthenga, udinga ukuqonda ngezigaba. Ngakho, lapho ekhetha kudingeka bacabangele nemingcele design kohlelo endaweni yokufaka. Master kumelwe asinake ingcindezi esiphezulu medium ukusebenza futhi ipharamitha okuzisholo, futhi acabangele umehluko ingcindezi supply kanye wesifunda ukubuya.
Valve ingasho elilodwa noma kwelinye ikilasi kuye emkhakheni ukusetshenziswa. Ngakho, amadivaysi ezisetshenziswa izinto ngabanye ukwakhiwa kwezindlu, ezezindlu kanye nezinsizakalo zomphakathi, ezindaweni zezimboni kanye ezindaweni amapayipi main. Ukulinganisela valve, isimiso okufanele ukwaziwa ngaphambi kokuthenga idivayisi, kungenziwa kukhethwe ngokuvumelana uhlobo uhlelo iphayiphi, okuyinto yakhelwe air-conditioning, ashisayo nabandayo amanzi, ukubanda noma ugesi. Phakathi kwezinye izinto, amadivaysi echazwe zihlukaniswa uhlobo Isibandisi, ezifana umusi, amanzi noma isixazululo glycol. Ngu uhlobo valve kokufaka zihlukaniswe fixed kanye adjustable.
Izinhlobo ezinkulu valve
Uma unesithakazelo uwusizo valve MSV, linikezwa ukudayiswa ezihlukahlukene, phakathi kwezinye onobuhle, ungabona idivayisi ukulungiswa manual, ngayo nefunda ngayo kulula oyifisayo Kwezinye izingxenye system kanye wonke amapayipi, ukucacisa ingcindezi kanye flow rate of the medium ngesikhathi amaphuzu control. Ukusebenzisa inhlukano valve ngokulingene Ungakhubaza izingxenye ngazinye, ewakhulula uketshezi ukusebenza. Inzuzo main kuyinto eziphansi, kodwa kufanele sinake nokushiyeka. Phakathi ukhiye - ikhono ukusetha ibhalansi kuphela ukubala isilinganiso DC nemingcele. At oscillations ukugeleza ezenzeka nezinhlelo zamanzi, sekulinganisa singasetjentiswa ngobugebengu.
Okuzenzakalelayo okulinganisa valve kabani intengo ruble 6000, futhi kungaba othomathikhi, it is ogibele emuva circuit input. Olunye uhlobo valve inikeza ithuba ulungise lokushisa of the medium.
Uma unquma ukuthenga okulinganisa valve "Danfoss", ukuthi ekuqaleni kufanele ukujwayelana izici ukufakwa. Ukuze uqinisekise ukunemba izilinganiso ngaphambi nangemva idivayisi kumele lumiswe ipayipi izingxenye elingenalo amajika. Ubude kweyeme ubukhulu. Ngaphambi umphini ngqo ipayipi obuphelele kufanele alingane ububanzi amapayipi 5, ezansi obuphelele valve kufanele kube diameters ezimbili noma ngaphezulu. Uma ungenalo acabangele lezi zincomo ngesikhathi efakwe ngokulingene umphini "Danfoss", iphutha kule izilinganiso lingafika ku-20%.
Amachibi okuhlobisa ngesakhiwo
Isonto Solid - kuyini? Indawo continuum zamaviki ekhalendeni isonto
Isaladi Light. iresiphi